तपाईलाई थाहा छ ? यसरी भएको थियो भगवान रामको मृत्यु ! – Todays Nepal
ऋषि दुर्वासा सधैं आफ्नो अत्यन्त क्रोधका कारण चर्चित थिए । उनको क्रोधको सिकार हरकोहीले हुनुपथ्र्यो । यहाँसम्म कि स्वयम् रामको पनि । लक्ष्मणले रोक्न खोज्दा पनि ऋषि दुर्वासा आफ्नो हटबाट पछि हटेनन् । अन्त्यमा उनले लक्ष्मण र राम दुवैजनालाई श्राप दिने चेतावनी दिए । लक्ष्मण द्वीविधामा परे कि अखिरमा आफ्नो भाईको आज्ञा तोड्ने कि उनलाई श्रापबाट बचाउने ? लक्ष्मण चाहँदैन थिए कि उनका कारण उनका भाईलाई कुनै हानी पुगोस् । त्यसपछि उनले एक कठोर फैसला लिए, आफ्नो बलि दिने ।
भर्खरै आयो अर्को दुखद खबर : खचाख यात्रु सवार रहेको बस दुर्घटना ५० घाइते